အလှူကို အားရပါရလှူနိုင်ဖို့နဲ့…. တရားတွေကို နတ်တွေကြားအောင် နှုတ်ကရွတ်တာ ဓမ္မအလှူဖြစ် မဖြစ်… | " မနာပဒါယီ "
အလှူကို အားရပါရလှူနိုင်ဖို့နဲ့…. တရားတွေကို နတ်တွေကြားအောင် နှုတ်ကရွတ်တာ ဓမ္မအလှူဖြစ် မဖြစ်…
။ အချိန် 7/03/2009 04:52:00 AM
၁။ တပည့်တော် လှူရတာ ဝါသနာပါပါတယ်။ အခု ထေရဝါဒသာသနာ မရှိတဲ့နိုင်ငံ ရောက်နေတော့ အဝေးကနေ မြန်မာပြည်ထဲကို လှမ်းပြီး အလှူအတန်း လုပ်ပေမယ့် ကိုယ်တိုင် လက်နဲ့ လုပ်ရသလို အားမရပါဘူး။ ပီတိဖြစ်တာလဲ များသောအားဖြင့် ကိုယ်တိုင် လက်နဲ့လုပ်ရရင် ပိုဖြစ်တယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါနကုသိုလ် များများဝဝ လုပ်ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဘယ်လိုဓိဌာန်ရမလဲဘုရား။
၂။ တရားတွေကို နတ်တွေ ကြားအောင် နှုတ်က ရွတ်တာ ဓမ္မအလှူပေးရာ ရောက်ပါသလား။ စိတ်ဝင်တစား တရားနာမယ့် နတ်တွေ အနားမှာ ရှိမရှိ မသိရင် ဘယ်လို လုပ်ရပါ့မလဲ။ ကိုယ်ပေးနေတဲ့အလှူကို ယူသူ ရှိမှ ရှိရဲ့လား သိချင်လို့ပါ။
A. ၁။ အလှူဒါနပြုလုပ်တဲ့အခါ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်မရွေးဘဲ လှူတတ်တယ်၊ လှူလိုတယ်ဆိုရင်တော့ ဒကာတော် ရောက်နေတဲ့နေရာမှာလည်း အားရပါရ ကိုယ်ထိလက်ရောက် လှူနိုင်တဲ့ နေရာများ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာ ဒုက္ခိတဂေဟာများ၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာများ၊ သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေး နေရာများ စသည်ဖြင့် အများကြီး ရှိပါတယ်။ ထေရ၀ါဒ ရဟန်းသံဃာတော်များကိုမှ လှူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်အာရုံပြုလို့ ရမယ့်ကျောင်းတိုက်များကို သွားရောက်လှူခိုင်းပြီး အဝေးကပဲ အာရုံပြုကာ ပီတိပွားနိုင်အောင် ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ သိပ်သဒ္ဓါတရားကောင်းပြီး အာရုံပြုမှုကောင်းနေရင်လည်း တစ်ဆင့်လှူဒါန်းခိုင်းပြီး ပီတိဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဘုရားလက်ထက်ကလို ကိုယ်ရှိတဲ့နေရာကို ကြွရောက်အလှူခံစေချင်ရင်တော့ ကိုယ့်ဘက်က အလွန်ပြည့်စုံအောင် ကြိုးစားရပါလိမ့်မ့်မယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားလုံးဝ ကောင်းမွန်အောင်၊ သရဏဂုံကောင်းကောင်းတည်နိုင်အောင်၊ ထက်သန်ပြင်းပြတဲ့ သဒ္ဓါတရားတွေနဲ့ ပြည့်စုံအောင်၊ ရှာဖွေထားတဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာ အလှူဝတ္ထုများဟာလည်း သမ္မာအာဇီဝကျပြီး သန့်ရှင်းအောင် စတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ကြိုးစားပြီး နေ့စဉ်အဓိဋ္ဌာန်ပြုရင်တော့ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်များ တစ်နည်းနည်းနဲ့ ရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
၂။ တရားတွေကို နတ်တွေကြားအောင် နှုတ်ကရွတ်တာ ဓမ္မအလှူပေးရာ ရောက်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်တစား နာတဲ့နတ်တွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ အနီးကပ်ဆုံးကတော့ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို စောင့်တဲ့ကိုယ်စောင့်နတ်များနဲ့ လောကပါလနတ်များ၊ ကောင်းတဲ့နတ်များဟာ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့သူရဲ့ အနားမှာ အမြဲရှိနေပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်ပေမယ့် အမျှယူသာဓုခေါ်ဖို့ ကိုယ့်အနားမှာ အမြဲရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ သိပ်ပြီးသဒ္ဓါတရား အားကောင်းလာရင် မထင်မှတ်တဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုများနဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့ သူကို နတ်များက စောင့်ရှောက်တတ်ပါတယ်။ ဒီတိုက်ဆိုင်မှုများကို ကြည့်ရင် ကိုယ့်အနားမှာ သူတော်ကောင်းတွေ၊ နတ်တွေအမြဲရှိတယ်ဆိုတာ မှန်းဆသိနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်လှူပေးနေတဲ့ အလှူကို ယူသူရှိမရှိ ဆိုတဲ့အချက်အတွက်ကတော့ သံသယဖြစ်စရာ မရှိပါဘူး။ အမြဲရှိနေပါတယ်။ တိုက်ရိုက်မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်ပေမယ့် ဘ၀သံသရာမှာ ကျင်လည်ခဲ့တုန်းက တစ်ချိန်ချိန်က တော်စပ်ပတ်သက်ခဲ့ဖူးသူတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့အလှူကို အမြဲစောင့်မျှော်နေတယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ အကယ်၍ သူတို့မရနိုင်တာတောင်မှ ကိုယ့်အတွက်ကတော့ ဒီအလှူပေးတဲ့ကုသိုလ်က ရပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်အလှူပေးတာ ရသည်ဖြစ်စေ မရသည်ဖြစ်စေ ကိုယ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်တစ်ခုအဖြစ်၊ ပြီးတော့ ကုသိုလ်ကို ကုသိုလ်နဲ့ ဆင့်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုအဖြစ် ယုံကြည်စွာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
4 မှတ်ချက်များ (...ရေးရန်):
တပည့်တော် ဒီဝါဆိုလပြည့်နေ့က စ၍ ကုသိုလ်ကောင်းမှုအထူးများကို ပြုချင်သဖြင့် ဘာတွေ ပြုသင့်သလဲဆိုတာ ညွှန်ကြားပေးတော်မူပါဘုရား။
တပည့်တော် ပြီးခဲ့သည့် လေးနှစ်ကျော် ကာလမှာ ကံဆိုးမိုးမှောင် အရမ်း ကျခဲ့ပါသည်။ ငါးပါးသီလ ကြိုးစားထိန်းပြီး ဒါနကောင်းမှုတွေ လုပ်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲမှုကို တောင့်ခံခဲ့ရပါသည်။ ယခု ဆန္ဒရှိခဲ့သည့်အတိုင်း ချွေးနှဲစာ စုငွေနဲ့ ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်း ဆောက်လှူပြီးဖြစ်သဖြင့် အလိုပြည့်ကာ စိတ်ချမ်းသာပြီး ဘဝသစ် ပြန်စချင်စိတ် ဖြစ်လာပါသည်။ တပည့်တော် ဒီဝါဆိုလပြည့်မှ စပြီး ဘယ်လို ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ လုပ်သင့်သလဲဆိုတာ လမ်းညွှန်ပေးပါဘုရား
မနာပဒါယီ အရှင်ဝိစိတ္တ(ဒိုက်ဦး) says:
ဒကာတော် ကြားရတာ ၀မ်းသာစရာပါ။ ကောင်းမှုတွေနဲ့ ပျော်မွေ့တာကောင်းပါတယ်။ ငါးပါးသီလကို အတတ်နိုင်ဆုံး လုံခြုံအောင် စောင့်ထိန်းနေပြီဆိုတော့ သီလနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထူးပြောစရာ မရှိပါဘူး။ ၀်ါတွင်းကာလမှာ ဒီငါးပါးသီလထက် ပိုပြီး ဥပုသ်နေ့တိုင်း ဥပုသ်သီလကို လုံခြုံအောင် စောင့်ထိန်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်။ ဒါနကုသိုလ်အနေဖြင့် အရုဏ်ဆွမ်းလောင်းတာလေးတွေလည်း လုပ်နိုင်ရင် ကောင်းပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဘာဝနာ အလုပ်ကို လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါနသီလအလုပ်တွေလည်း လုပ်ရင်း တစ်ဘက်ကလည်း ၀ိပဿနာ တရားလည်း အားထုတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ ဒုစရိုက်တွေ မကျူးလွန်မိဖို့ပါ။ ဒုစရိုက်ဆိုတာ မကောင်းတဲ့ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံတွေနဲ့ ကျူးလွန်နိုင်တဲ့ အကျင့်တွေကို ပြောတာပါ။ ဒီဒုစရိုက်တွေကို မလုပ်ဖြစ်အောင် သီလဆောက်တည်ခြင်းဖြင့် ကာယကံ ၀စီကံတွေကို ထိန်းထားနိုင်ပြီး ဘာဝနာတရားပွားများ အားထုတ်ခြင်းဖြင့် မနောကံကို ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သီလကို အခြေခိုင်အောင်လုပ်ပြီး ၀ိပဿနာ ဘာဝနာ အလုပ်ဆိုတဲ့ ကုသိုလ်တွေကိုသာ ကြိုးစားလုပ်ကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
I am so much appreciate to know about that. thanks for question and answer!
I am so much appreciate to know about that. thanks you so much to question and answer
Spot မှသည် com အဖြစ်သို့… သို့မဟုတ် http://www.ph...
မချစ် မမုန်း အကောင်းဆုံး…
အလှူကို အားရပါရလှူနိုင်ဖို့နဲ့…. တရားတွေကို နတ်တွေ...